शौक, कार्ड खेल
सबै भन्दा प्रसिद्ध र सफल पोकर प्लेयर, दानियल Negreanu, व्यावसायिक स्नूकर को भाग्य भविष्यवाणी गरे। आफ्नो अधिकांश समय उहाँले, पोकर सहित जुवा को वातावरणमा निरन्तर रहेको र आफ्नो भाग्य प्रयास गर्ने निर्णय जहाँ टोरन्टो, शहर को बिलियर्ड कोठा मा बिताए। यो परिस्थितिमा आफ्नो पछि जीवन मा निर्धारण कारक बन्यो। सफलता र सिप तुरुन्तै जवान मा स्पष्ट। चाँडै जुवा हल टोरन्टो उहाँले cramped भयो, र उहाँले लस भेगास सारियो।
संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध खेलाडी
वर्तमान मा दिन, दानियल Negreanu सबै भन्दा प्रसिद्ध र चिन्न पोकर प्लेयर छ। यो जसको नम्बर लगातार खेलाडी को खुलापन र मित्रता कारण बढ्दै छ प्रशंसक को एक ठूलो संख्या, छ। यसको सफलता पेशेवर क्षमता, तर पनि आफ्नो अद्भुत संचार कौशल संग मात्र होइन कारण छ। उहाँले लामो अद्भुत Storyteller को प्रतिष्ठा थियो। दानियल रोमाञ्चक र colorfully पोकर तालिका मा भयो कि कुनै पनि सक्छन् पनि पूर्ण unremarkable घटना वर्णन गर्नुहोस्। तर यो आफ्नो गुण र पोकर बस एक पौराणिक कथा खेल्न यसको क्षमता छ, त्यो त राम्रो कहिलेकाहीं कार्ड मार्फत हेर्न देखिन्छ जो आफ्नो विरोधीको, पढ्न सक्षम थियो।
अरूलाई लाखौं एक सरल र धेरै धनी परिवार बस्थे देखि दानियल Negreanu जसको जीवनी, विभिन्न कुनै छ। भविष्यमा करोडपति क्यानाडा राज्य मध्ये, टोरन्टो, 1974 मा जन्म जुलाई 29 मा। आफ्नो आमाबाबु आठ वर्षसम्म आफ्नो जन्म स्थायी निवास लागि क्यानाडामा रोमानिया देखि सारियो अघि जो आप्रवासी थिए। एनी आमा र बुबा Constantine वस्तुतः कुनै डाटा बारेमा। हामी मात्र तिनीहरूले पूल मा एक खेलाडी रूपमा एक पेशेवर क्यारियर को छोरा भविष्यवाणी कि, एउटा कुरा थाहा छ।
प्ले बिलियर्ड्स, उहाँले पोकर खेलाडी नजिक राखिएको थियो, र 15 वर्ष पूर्ण यसलाई खेल्न सिकेका छन्। खेल तुरुन्तै पूर्ण दानियलले फसेको छ उहाँले पनि, आफ्नो अध्ययन बलिदान र उच्च विद्यालय देखि स्नातक छैन पोकर को खेल को व्यावसायिक स्तर सारियो र नियमित पोकर टूर्नामेंट भ्रमण गर्न थाले। आफ्नो शहर मा, त्यो समय पोकर प्लेयर Evelyn को मा एक पेशेवर संग पूरा, रणनीति adopts र अमूल्य अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्।
1996 को दुखद घटनाहरु आफ्नो भविष्य सोच्न र आफ्नो हातमा मामिलामा लिन युवा धक्का। यस वर्ष आफ्नो पिताको मृत्यु र दानियल Negreanu लस भेगास उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे। संसारमा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा चिरपरिचित खेलाडी बन्न - उहाँले आफ्नो कदर सपना लागि "सौर शहर" गए।
पहिलो प्रमुख प्रतियोगिताको
को अवसर विश्लेषण र अनुभव प्राप्त, लस भेगास मा सबै भन्दा ठूलो क्यासिनो को मालिक मंचन जो धेरै प्रतियोगिताहरु, मा भाग लिन पछि दानियलले उसले धेरै कुरा लागि तयार थियो भनेर बुझे। आफ्नो क्षमता व्यावसायिक मालिकको को ईर्ष्या थिए। उहाँले विश्व पोकर फाइनल, Foxwood मा आयोजित को नाम अन्तर्गत प्रतियोगिता मा भाग लिए 1997 मा, अधिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्। एक ठूलो नगद पुरस्कार उहाँले जीत थिएन, तर प्रतियोगिताको सबै भन्दा राम्रो खेलाडी गर्न एक कल प्राप्त।
अर्को वर्ष पछि, Negreanu विश्व Seriesof पोकर भनिन्छ गम्भीर प्रतियोगिताको संलग्न। दानियल Negreanu यो प्रतियोगिताको फेरि जित्छ, तर यो $ 169 460 मा एक महत्वपूर्ण लाभ संग जान्छ। तर दानियल लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो WSOP सुन कंगन जीत कान्छो खेलाडी को शीर्षक छ। तर उहाँले रोक्न र सुन कंगन सङ्कलन गर्न थाले थिएन। दोस्रो, उहाँले 2003 मा प्राप्त, एक वर्ष पछि उहाँले तेस्रो सम्मानित गरियो र 2008 मा एक मानार्थ चौथो सुन कंगन पाए।
यसलाई 2005 सम्म आफ्नो उपलब्धि पिटे छैन सकिएन भनेर यस्तो महत्वपूर्ण विजय थियो। यस वर्षा निम्न महत्वपूर्ण नगद winnings संग प्रमुख प्रतियोगिताहरु मा विजय पोखे। त्यसैले, प्रमुख प्रतियोगिताहरु मा पोकर प्लेयर Borgata पोकर खुला 1 117 400 डलर जित्यो र आफ्नो winnings पाँच हीरा विश्व पोकर क्लासिक मा 1.770.218 डलर totaled छन्।
दानियल Negreanu लिन्छ र त्यो त भाग्यमानी थियो जसमा कम प्रतिष्ठित WPT घटना श्रृंखला, सक्रिय भाग, तर अझै उहाँ सधैं प्रतियोगिताको नेता प्रदर्शित छ। दानियल उहाँले 755.525 डलर रकम पहिले नै एक पुरस्कार हुन्छ, खेल को एक श्रृंखला मा सर्किट टूर्नामेंट मा खेल्छ
एक बस इनाम
यो वर्षको पुरस्कार समारोह मा पोकर खेलाडीहरू ठाउँ लिन्छ, र दानियल पोकर राजदूत शीर्षक प्राप्त किनभने वर्ष 2005, सबै भन्दा प्लेयर लागि महत्वपूर्ण थियो। पुरस्कार यस प्रकारको को Wynn लस भेगास मा पहिलो पटक हो। र अर्को वर्ष, यो इनाम र दिन्छ पसंदीदा पोकर प्लेयर शीर्षक। उहाँलाई मात्र राम्ररी पोकर सम्बन्धित मान्छे सिक्न लागि यो व्यर्थमा पारित छैन यस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त। यस समयमा, उसलाई र विश्वव्यापी ख्याति कमाउने आउँछ।
यसलाई अन्तर्गत नाम सुझाव रूपमा protagonist जो, पोकर मा खेलाडी एक भिडियो गेम, र भिडियो गेम लेख्न "दानियल Negreanu संग स्ट्याक।" यसलाई आफ्नो पुस्तक, सुपर प्रणाली द्वितीय को एक निरंतरता लेख्न निर्णय गर्दा पोकर, डोयले Brunson बारेमा पुस्तकहरू प्रसिद्ध लेखक, एक bestseller भयो, यो Negreanu सह-प्रायोजित गर्न निम्तो दिनुहुन्छ। सबैभन्दा विशेषज्ञहरु डोयले दानियल संग लेखे जो, र यो दिन गर्न पुस्तक, संसारमा सबै भन्दा राम्रो छ भन्छन्।
कसैले खेल "पोकर ताराहरु" मा इन्टरनेट मा प्रसिद्ध खेलाडी संग पोकर खेल्न सक्छन्।
एक पोकर खेल समयमा उहाँले धेरै सफलता हासिल र 10 लाख डलर द्वारा यसको राजधानी वृद्धि गर्न सक्षम थियो। दोस्रो मात्र खेल मुख्य घटना WSOP, 2006 मा आयोजित जीत छ जेमी गोल्ड, संसारमा मा winnings योगफल मा, एक पुरस्कार 12 लाख डलर प्रस्तुत।
दानियल Negreanu बारेमा रोचक तथ्य
दानियल उहाँले विभिन्न सोख धेरै छ विविध मानिस छलफल। उहाँले, लेखन पुस्तकहरू संलग्न छ कहिलेकाहीं मात्र सह-लेखक रूपमा। बारेमा आफूलाई सबै »(सबै खेलाडी लागि होल्डम बुद्धि) को लागि" बुद्धि होल्डम खेलाडीहरू भनिन्छ पोकर बारेमा पुस्तक, लेखे। केही समय पछि, ज्योति पोकर आफ्नो अर्को पुस्तक "एउटा प्रभावकारी रणनीति होल्डम", मूल कुराहरू र पोकर खेल को रहस्य बुझ्न सहयोग गर्न अभिप्रेरित बाहिर जान्छ।
प्लेयर शो र चलचित्रहरू काम। चलचित्र "एक्स-पुरुष आफ्नो भूमिका लागि सबै भन्दा राम्रो ज्ञात। सुरु गर्नुहोस्। वोल्भेरिन "र चलचित्र मा" भाग्यशाली तपाईं। " यो गीत उठ्दै माथि भेगास गायक Keti Perri मा लागि भिडियो मा देख्न सकिन्छ।
दानियल पनि गोल्फ को विश्व शृंखला मा भाग। र म 2000 देखि एक शाकाहारी बन्न निर्णय गरे। तर, यो पर्याप्त छैन कि विचार, र यो 2006 देखि - एक शाकाहारी।
पोकर सर्कलमा दानियल Negreanu राम्रो उपनाम बच्चाहरु पोकर ज्ञात।
कार्ड संग चाल कसरी?
पोकर मा सेट गर्नुहोस्। अर्थ संयोजन फोटो र
21 अनलाइन, वा वास्तविक विरोधीहरूले विरुद्ध कसरी प्ले गर्न
शुरुआती लागि पोकर संयोजन
कार्ड खेल "Burkozel": नियमहरू
नक्सा साइकल - गुणस्तर र originality
जाडो लागि Adzhika साग: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु र विशेष गरी पकाउने
Gtd - यो के हो? को यो कि कार मा gtd?
रूसको मुख्य व्यापार साझेदार: निर्यात, आयात
दबाइ 'दिवान'। प्रयोग र छोटो विवरणको लागि निर्देशन
साक्षरता अभियान: कसरी frying अघि मशरूम खाना पकाउनु?
मध्ययुगीन इतिहासमा Knightly आदेश
एक स्वादिष्ट चुकंदर सलाद कसरी खाना पकाउनु